Yintoni i-ITIL? Ziziphi iinzuzo ze-ITIL Certification? | IYO
Yintoni i-ITIL? Ziziphi iinzuzo ze-ITIL Certification?
I-ITIL yeStatistim Overview kunye neNkqubo yeMboleko
Ukuphononongwa kwesiqinisekiso se-ITIL
Iindleko ze-ITIL Certification
Ziziphi iinzuzo ze-ITIL® Certification?
I-ITIL (i-IT Infrastructure Library) Kujoliswe ekumiseni iziko lonke ulawulo lweenkonzo ze-IT kunye nemisebenzi yalo enxulumene neenkonzo, umzekelo, ukhetho, ukucwangciswa, ukuveliswa, ukuhanjiswa, inkxaso kunye nohlalutyo. MnaKU LAWULO vumela ukuqokelela idatha, uhlalutyo lwayo kunye nokubonisa, ngokulandela iindlela zokuthenjwa zokufikelela kunye nokuhlola. Isikhokelo solawulo lweenkonzo ze-IT esetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi ukufezekisa amanqanaba enkonzo engaqinisekanga kunye nokuphucula umkhiqizo.
Njengoko izixhobo zedatha zihlakulela ngokuzenzekelayo, zijika zibe yinto ebingenakunyaniseka yoshishino ukuba ivumelwano kunye nokulungiselela iingcali kwintsimi yeemigodi kunye nokuhlalutya. Kulapha ITIL Certificationsiphendukela kwinqanaba elinyanzelekileyo labafundi abaphefumlelweyo ngokuzibeka njengabaphandi beenkcukacha okanye iingcali zedatha. Ukugqithisa uvavanyo lwe-ITIL ukuqinisekiswa ukuba unokusebenzisa i-ITIL yokufunda ngokubanzi kwimibutho yenkonzo yayo yokulawula, ukuhlawula ubuncinane ubungakanani babo.
Ukuqinisekiswa nguvavanyo lwemihla ngemihla ye-3 enamazinga amane okuvunywa:
1.I-ITIL Foundation level eligxininisa kwisigama kunye nendlela yokwenza inkxaso yeenkonzo ze-ITIL kunye nokunikezelwa kweenkonzo (iikredithi ze-2),
2. I-ITIL ephakathi iqulethe iimodyuli zokuqeqesha ezihlukeneyo, apho ungakhetha khona iimodyuli ezimbini, ukugcina imodyuli yee-modecyclecle inyanzelekileyo kunye neyomodyuli enye eyongezelelweyo (i-credits ze-15),
3.I-Experts Level ITIL tshekisha ukufunda kunye neendlela ezichanekileyo ze-ITIL (iikredithi ze-22) kunye
4.Umgangatho wezakhono ze-ITIL kuquka ukucwangciswa, ulawulo kunye nemisebenzi kunye nolawulo olupheleleyo lweenkonzo zonxibelelwano lweenkonzo zolwazi (akukho zikredit ezongezelelweyo kodwa akukho ngaphantsi kwe-5 iminyaka yokubandakanyeka komsebenzi we-IT Domain).
* Iikhredithi zifakwe kwizinga ngalinye. Ngale ndlela, iikhredithi ezidlulileyo zithengiswa kumanqanaba alandelayo.
Iindleko ITIL iinkqubo uhlukeneyo kumanqanaba ahlukeneyo namaziko. Ngokufanayo kuxhomekeke ekubuneni kweentsuku zeprogram yokulungiselela. Ngokubanzi, iindleko ziphakathi kwe-US $ 200 ukuya kwi-US $ 1000, eyahlukileyo nexesha lokulungiselela inkqubo. Ixesha leprogram yoqeqesho lwe-ITIL yi-2 kwiintsuku ze-7.
Uya kuhlola ukukwazi ukuza apha: - Iincwadi eziphezulu zokufunda Ukufumana i-ITIL Foundation Certification
Nantsi inqununu ithathwa ityala kwizinga ngalinye, kodwa khumbula ukuba litshintshe ukusuka kwintlangano ukuze iqalise ngokubhekiselele kumanqanaba okukwazi kootitshala babo, iindlela zabo zokubonisa, njalonjalo.
Isiseko se-ITIL (kwiziko elivunyelweyo) US $ 205.00
Isiseko se-ITIL (ngokuthe ngqo) US $ 226.00
I-ITIL phakathi kwe-US $ 750.00
I-ITIL Ingcali ye-US $ 750.00
Amaxabiso ITIL Certification Ikhosi okanye ukuhlolwa kunokutshintsha ngexesha.
Ukubeka i-ITIL kwikoluhlu lwakho luye luncedo kwimeko apho kufuneka ubeke uphawu lokusebenzisa imodeli yolawulo lweenkonzo ze-IT ukuya phantsi kwizabelo eziphathelene ne-IT. Ukwandiswa ngokufanelekileyo komntu ngamnye. Uqeqesho ngeklasi ye-ITIL kunye nokuqinisekiswa kubonisa ukubizwa kwabo kwi-ITIL.
I-ITIL isakhelo esinamandla kwinkqubo nganye ye-IT. Ukususela kubungqina obubonakalayo bokucwangcisa, ukuphuhliswa, ukuhanjiswa kunye nenkxaso, inokudibaniswa ukufezekisa iinkqubo zenkqubo. Inokuphucula uhlobo lomsebenzi wee-supervisors zakho ze-IT, abacebisi, abaphathi, iingcali zezoshishino okanye nabani na abaqeshwa ngokubanika umgca ogqithisiweyo wokulawula i-market kunye ne-IT efanelekileyo.
Isinqumo - I-ITIL yiThala leNcwadi ekulu kakhulu ye-IT yolawulo oluvela kumbutho omkhulu kwihlabathi. Ukujoyina iklasi ye-ITIL kuya kunika abaqeqeshi be-IT izixhobo ezibanzi kunye nezicwangcisiweyo zokusebenza kunye nokujongana neenkqubo ze-IT zolawulo kunye neendlela ezifanelekileyo.
Indlela yokufumana i-ITIL Foundation Certification
ITIL Vs I-PMP Certification? Yintoni efanelekileyo kuwe?